नेपाल बन्दको दिन कहाँ-कहाँ भयो बम बिस्फोट र आगजनी ? यस्तो छ ताजा अपडेट — Imandarmedia.com
नेपाल बन्दको दिन कहाँ-कहाँ भयो बम बिस्फोट र आगजनी ? यस्तो छ ताजा अपडेट
काठमाडौ। संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएसंगै देशभर चर्को बिरोध सुरु भएको छ। एमसीसी संसदमा टेबुल हुनुपूर्व नै व्यापक बिरोध प्रदर्शन भए पनि सत्तारुढ गठबन्धनले एमसीसी पास गरेरै छोड्यो।
आइतबार संसदमा एमसीसी अनुमोदन भएसंगै बन्द बिरोधी गठबन्धनले सोमबार नेपाल बन्दको आह्वान गरेको छ। बन्दका कारण देशभरको जनजीवन ठप्प छ।
बन्दकर्ताले काठमाडौँको सुकेधारामा दूधको गाडी तोडफोड गरेका छन्। चाबहिल र कलङ्कीमा ३ वटा बसमा तोडफोड भएको प्रहरीले जनाएको छ। सडकमा बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
यस्तै पोखरामा शक्तिशाली बिस्फोट भएको छ। लेखनाथमा बिस्फोट जस्तो चर्को आवाज आएको स्थानीयले संचारकेन्द्रलाई बताए । यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
त्यस्तै काभ्रेको बनेपामा एउटा बम भेटिएको छ, प्रहरीले पनि शंकास्पद वस्तु फेला परेको पुष्टि गरेको छ। बनेपाको पुल बजारमा शंकास्पद बस्तु फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जानकारी दिएको छ।
अहिले पुलबजारको खडकखण्ड बन्द गरिएको छ। नो एमसीसी लेखिएको शंकास्पद वस्तु भएको क्षेत्रलाई प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ। शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ।
बन्द कर्ताले बन्द सफल पार्न यस्तो बस्ति राखेको प्रहरी अनुमान छ। उता नेपाल बन्दको असर सुदुरपस्चिमका ९ वटै जिल्लामा परेको छ। सुदुरपस्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा र वैतडी लगायतका जिल्लामा बन्दको प्रभाव परेको छ।
बन्दका कारण लामो तथा छोटो दूरीका सवारीसाधन ठप्प छन् भने विद्यालय र बजार पनि खुलेका छैनन्। बन्दको आह्वान गर्दै ६ राजनीतिक पार्टी, २ मोर्चाका नेता–कार्यकर्ता बिहानैदेखि महेन्द्रनगर, डडेल्धुरा बागबजार, बैतडी लगायतका जिल्लाका सडकमा उत्रिएका छन्।
कञ्चनपुरका सडकमा बिहानैदेखि टायर बालेर बन्दकर्ताहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। राष्ट्रघाती एमसिसि बिरुद्ध सडकमा उत्रिएका बन्दकर्तालाई प्रहरीले लाठिचार्ज गरेको थियो।
नेपाल बन्द गराउदै हिडेको अवस्थामा नेकपा भीमदत्तनगर सचिब दीपेन्द्र ऐरी र अखिल क्रान्तिकारी कञ्चनपुरका सह-सचिब हरिश ऐरीमाथि प्रहरीले प्रहरीले लठ्ठी चार्ज गर्दा घाइते भएका छन्।
उनहरु दुवैको टाउकोमा चोट लागेको नेकपा कञ्चनपुरले जनाएको छ। बन्दकर्ताहरूले एम्बुलेन्स, पानी र दू‌ध बोक्ने गाडी, प्रेस, कूटनीतिक नियोगका गाडी चल्न दिएका छन् भने अरू प्रायः सबै बन्द गराएका छन्।
बन्दमा जनसमुदायको व्यापक समर्थन देखिएको नेकपाले जनाएको छ। बन्दमा कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिनका लागि मुख्य मुख्य चोकहरुमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपा, आहुती नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल, कर्णजीत नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादी र सिपी गजुरेल नेतृत्वको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले दलले एमसीसी अनुमोदन गरेको भन्दै खारेजीको माग गर्दै नेपाल बन्द आह्वान गरेका हुन्।
तेस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू र आफ्नो पार्टीले एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने नबताएको जानकारी दिएका छन्।
खुमलटारस्थित आफ्नै निजी निवासमा सोमबार अपरान्ह पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राखेर प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएको जानकारी दिए।
तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो पुरानै अडान लिइरहँदा राष्ट्रिय सहमति कायम नभएको उनको भनाइ छ। सडकमा समेत नाराबाजी हुने भइरहेको अवस्थामा गठबन्धन विघटन हुनेदेखि सरकार परिवर्तनसम्मको खेल हुन थालेपछि संविधान नै डिरेलको अवस्थामा पुग्न थालेपछि एमसीसी अनुमोदन गर्न सहमति जनाएको प्रचण्डले बताए।
एमसीसी पास नभए डरलाग्दो अवस्था आउनसक्ने देखेपछि आफू यसमा सहमत भएको प्रचण्डको भनाई छ। संशोधन र परिमार्जन गरेर मात्र एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने आफूले बताउँदै आए पनि प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक घोषणापत्र जारी गरेर सदनबाट पारित गराउन माओवादी केन्द्रले सहमति जनाएको प्रचण्डले जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभाबाट घोषणा भएको अर्को पक्षले स्वीकार्नुपर्ने र नस्वीकारे स्वतः खारेज हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताको सुझाव आएपछि आफूले शीर्षनेताहरूमाझ राखेँ, उनले भने, ‘यसबारे काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पनि जानकारी दिएर अनुमोदन गरिएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार मान्यता पाउने गरी संविधान, देशलाई बचाएर प्रतिनिधिसभा घोषणापत्र जारी गरेर एमसीसी अनुमोदन गरेपछि आफू खुसी भएको प्रचण्डको भनाइ छ।